Shina mpanamboatra sy mpamatsy sokitra | famonjena
1. Misoroka ny fandefasana be loatra: rehefa manantona fiara mandeha amin'ny finday, finday sns sns dia afaka misoroka ny fanimbana be loatra matetika amin'ny batterie izy io, manitatra be ny ain'ny bateria ary mampihena ny fanjifana angovo.
2. Hatramin'ny herinaratra mandeha ho azy aorian'ny famerenany feno: tapaho ny herinaratra avy hatrany aorian'ny famenoana ny bateria, mandà ny fihoaram-pefy sy ny hafanana mba hialana ny afo.
3. Fanafihana mahery vaika: ny fiasa voafetra sy haingana haingana dia afaka misakana ny fampitaovana elektrika tsy hiteraka afo noho ny fitomboan'ny fandehanana ankehitriny rehefa misy tsy ara-dalàna na tsy misy naoty
4. antontan'isa herinaratra: refy fandrefesana angovo azo avy amin'ny herinaratra, sy ny fandrefesana herinaratra, ahafahan'ny mpampiasa mahafantatra ny tena fanjifana herinaratra sy ny fanjifana herinaratra mitahiry herinaratra.
1. Fampiasa asa: Ny sipa manan-tsaina dia afaka mamaritra ny fahavitan'ny fiampangana amin'ny alàlan'ny fiovan'ny herinaratra, ary ny herinaratra mandeha ho azy mba tsy hisian'ny fiantraikany amin'ny fiainana ny bateria.
2. Fototry ny fotoana: azo atao ny fehezanteny ara-potoana, hatramin'ny 8 isan-karazany. Azo averina sy mandeha io arakaraka ny fotoana voatondro.
3. Ny fampahalalana parameter: ao amin'ny maodely tsy misy tovana, tsindrio ny lakilasy "ambony" sy ny "midina" raha te hijery ny volavolan-jiro, ankehitriny, herinaratra, hery manangona, sns.
4. Fivarotam-boky: amin'ny fanjakana, dia tsindrio ny lakile "Ampidiro" mandritra ny 3 segondra mba hanodinana azy ankodina.
6. Fanavaozana ny herinaratra: Rehefa mampiseho ny herin'ny komity ny LCD, dia manorena ela ilay bokotra "Set" mandritra ny 3 segondra hamerenana ny fahefana cumulative
7. Fiarovana tafahoatra: rehefa mihoatra ny 1100W ny hery, hongotana ny herinaratra ao anaty 2 segondra, jiro ny tondro ary haverina haverina ho azy indray ny hery aorian'ny 30 segondra hanapahana ny fahefana rehefa avy ny fihoaram-pefy telo misesy, ny herinaratra dia Tapaka mandrakizay, ary afaka manohy ny asa ianao amin'ny fanerena ny lakile "Enter".
Ambaratonga mavitrika 1.0
~ 75 -20 ℃
Previous: Mirefy angovo elektronika miampy telo tonta
Afeno ny sokitra Smart
Mini torolàlana torolalana maranitra
Sbola fitsapana maranitra
Sady an-trano maranitra
Zatovo Fiainana Smart
Fahazavana fanairana mazava
Silo jiro maranitra
Sofina amin'ny rindrina Smart